कुकुरहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो सीट रक्षक: तपाइँको कार को ख्याल राख्नुहोस्! | कुकुरहरुको संसार
कुकुर कार सीट रक्षक
सुसाना Godoy | 23/09/2021 12:14 | कुकुरका सामानहरू
हामी हाम्रा कुकुरहरु संग यात्राहरु को सबै प्रकार गर्न मनपर्छ। तेसैले, सबैभन्दा आरामदायक कुरा उनीहरुलाई कार मा बोक्नु हो, यद्यपि यस को लागी हामी धेरै सावधान रहनु पर्छ किनकि हामी जान्दछौं, कुकुरहरु अझै रोकिदैनन् र यदि उनीहरु पनी पनी पक्कै पनि सबै सीटहरु फर संग भर्नछन्। तेसैले हामीलाईaचाहिन्छ कुकुरहरु को लागी कार सीट को लागी रक्षक.
सबैभन्दा आधारभूत सामानहरु मध्ये एक हो कि हाम्रो लागी जीवन सजिलो बनाउँछ, जबकि हाम्रो सवारी साधन को स्थिति को ख्याल राख्दै। यदि तिनीहरू सबै फाइदा हुन्! आज तपाइँ तिनीहरूलाई पत्ता लगाउनुहुनेछ, तर सबै कुरा के तपाइँ कार सीट संरक्षक को बारे मा जान्न आवश्यक छ, किनकि हामी चाहन्छौं कि तपाइँ सधैं एक तपाइँलाई चाहिएको छान्नुहोस्।
1 कारहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो सीट रक्षक
2 के यो सीटहरु को लागी एक संरक्षक ल्याउन आवश्यक छ जब हामी कार मा कुकुर लिन्छौं?
3 कुकुर कार कभर को उपयोग को लाभ
4 कार सीट को प्रकार कुकुरहरु को लागी कभर
4.1 युनिभर्सल कभर
4.2 सुरक्षा सीट
5 कस्तो राम्रो कार सीट रक्षक जस्तै देखिनु पर्छ
6 जहाँ एक कुकुर कार सीट रक्षक किन्न
कारहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो सीट रक्षक
यहाँ कुकुरहरु को लागी कपाल र अन्य गंदगी लाई रोक्न को लागी तपाइँको वाहन को असबाब दाग को लागी सबैभन्दा सिफारिश कार सीट संरक्षक को एक चयन छ:
Pecute कुकुर प्रकरण ...
डोनलिन्नो कुकुर केस...
कार्तिया कार कभर...
के यो सीटहरु को लागी एक संरक्षक ल्याउन आवश्यक छ जब हामी कार मा कुकुर लिन्छौं?
सत्य यो हो कि यो आवश्यक छ वा अत्यधिक सिफारिश गरीएको छ। हामी मात्र जब हामी लामो यात्राहरु गर्न को लागी यसको बारे मा सोच्न को लागी छैन, तर यदि हामी कहीं उहाँ संग एक पैदल यात्रा को लागी जाँदैछौं र हामी कार लिन को लागी, यो पहिले नै एक राम्रो विकल्प हुनेछ। किनकि जनावरको ठाउँ हुनेछ किनकि हामी सजीलो सास फेर्न सक्छौं र हाम्रो कार को हेरचाह को बारे मा सोच्न को लागी जारी राख्न सक्छौं। त्यसोभए हामी एउटा ढु with्गाले दुईवटा चरा मार्छौं सान्त्वना र सफाई को मामला मा.
यद्यपि अर्कोतर्फ, त्यहाँ धेरै मानिसहरु जो वाहक को उपयोग गर्न को लागी वा सीटहरु मा पहिले नै उनीहरु को लागी लक्षित छन् र कि सजीलै कार मा राखिएको छ मा रुचि छ। एक सुनिश्चित गर्न को लागी कि ड्राइभिंग सही हुनेछ, distractions बिना।
कुकुर कार कभर को उपयोग को लाभ
सबै कपाल स collect्कलन हुनेछ त्यो पतन हुन सक्छ र उनीहरुलाई सीटमा टाँस्नबाट रोक्न सक्छ।
हाम्रो जनावरहरु को लागी आराम प्रदान गर्दछ किनभने तिनीहरू सामान्यतया एक नरम स्पर्श वा एक हल्का प्याडिंग छ।
यदि तपाइँको पाल्तु जनावर संग हिड्ने क्षेत्र वा पानी को नजिक मा भएको छ, तपाइँ कार मा फोहोर बाट बच्न सक्नुहुन्छ किनकि यो मामला हो कि यो आकर्षित गर्दछ।
साथै, कार नमी बाट बचाउँछ, सीटहरु क्षतिग्रस्त हुन बाट रोक्न।
बिर्सनु बिना गन्ध। किनभने तिनीहरू सामान्यतया सामान्य छन् र यस कारण को लागी, यो सधैं सीटहरुमा भन्दा कभर मा रहन को लागी राम्रो छ।
अर्को फाइदा यो छ कि कार मा कम खरोंच हुनेछ।
तिनीहरू सामान्यतया केहि पकेट वा डिब्बाहरु छन् जहाँ तपाइँ आफ्नो घरपालुवा जनावरहरु को लागी आवश्यक सामानहरु भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ।
कार सीट को प्रकार कुकुरहरु को लागी कभर
यो एक आधारभूत आवरण हो कि तपाइँ आराम संग सीटहरु मा राख्न सक्नुहुन्छ। नबिर्सनुहोस् कि त्यहाँ ट्रंक को लागी विकल्प पनि छ। यो एक फराकिलो आवरण हो कि हामी भाग जहाँ हाम्रो पाल्तु जनावर यात्रा गर्न को लागी खुलाउनु पर्छ। तर हो, हामीले यसलाई राम्रोसँग समात्नु पर्छ ताकि यो सार्दैन। यसको लागी, तिनीहरू सामान्यतया पट्टिहरु छन् कि headrests संग जोडिएको छ। विशाल बहुमत मा पनि खुल्लाहरुको एक श्रृंखला छ जसको माध्यम बाट सीट बेल्ट संलग्न छन्।
कभर कुकुर कार र ...
यदि तपाइँ एक पूरा आवरण चाहनुहुन्न किनकि सायद तपाइँको कुकुर सानो वा उग्र छ, तब एक कार सीट जस्तै केहि छैन। व्यक्तिगत सीट को एक प्रकार हो तर त्यो पनि कार को सोफाहरु को लंगर हुनेछ। बच्चा सीटहरु को लागी समान तर यस मामला मा हाम्रो घरपालुवा जनावरहरु को लागी। याद गर्नुहोस् कि तपाइँ यो राम्रो संग पकड छ र कि एक पटक तपाइँ गर्नुहुन्छ, उनीहरु लाई पनी बेल्ट को रूप मा पट्टा छ उनीहरुलाई संलग्न गर्न को लागी। यस तरीकाले हामी विचलन बाट बच्न सक्छौं कि पा wheel्ग्रा मा विनाशकारी हुन सक्छ। तिनीहरू सामान्यतया पनरोक छन् र राम्रो सास फेर्न को लागी जाल समाप्त हुन्छ।
कस्तो राम्रो कार सीट रक्षक जस्तै देखिनु पर्छ
प्रतिरोधी: प्रतिरोध जब हामी जनावरहरु को बारे मा कुरा गर्छौं अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। किनकि हामी जान्दछौं कि सबै कुकुरहरु बराबर शान्त छैनन् र यही कारणले गर्दा हामी एक सामग्री को लागी देख्छौं कि उपयोग को समर्थन गर्दछ र हाम्रो प्यारो पिल्लाहरु को पंजहरु लाई पनि। एक कुकुर कार सीट रक्षक को रूप मा मोडेल को विशाल बहुमत, प्याडेड आउँछ र यो राम्रो प्रतिरोध गर्न अनुमति दिन्छ।
रेनकोट: क्रम मा कुनै पनी समस्या छ कि तपाइँ यात्रा को समयमा हुन सक्छ बाट बच्न को लागी, यो सँधै उचित छ सुनिश्चित गर्नुहोस् कि रक्षक पनरोक छ। न केवल तपाइँको शारीरिक आवश्यकताहरु को कारणले गर्दा, तर किनकि तपाइँ आफ्नो खुट्टा अझै गीला संग कार मा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ र यो नमी सीट मा रहन को लागी, समय को साथ बिगार्ने कारण हुनेछ। यस प्रकार, सबै कुरा को मामला मा प्रमुख समस्या बिना हुनेछ।
कुकुरको बेल्ट पास गर्न प्वाल संग: उनीहरु सामान्यतया यो ल्याउँछन्, किनकि त्यो तरीकाले हामी यात्रा गर्दा धेरै आराम सुनिश्चित गर्दछौं। तर यो हो भनेर पक्का गर्न चोट लाग्दैन खुल्ला वा प्वाल छ। किनभने यो त्यहाँ हुनेछ जहाँ बेल्ट वा समर्थन छ कि हाम्रो घरपालुवा जनावर राम्रो संग समर्थित जान को लागी पास गर्न को लागी हुनेछ।
टाउको प्रतिबन्ध संग: कभर कार वा हाम्रो घरपालुवा जनावरहरु को आन्दोलन संग सार्न बाट रोक्न को लागी, उनीहरु लाई पनि लंगर को एक प्रकार को हुनु पर्छ, लामो स्ट्रिप्स को रूप मा, जो headrests संलग्न हुनेछ। हाम्रो कभर को आकार मा निर्भर गर्दछ, उनीहरु मात्र पछाडि वा अगाडी को लागी संलग्न गर्न सकिन्छ।
एन्टी-पर्ची: एक सजीलो को लागी सफा, हल्का प्याडेड र प्रतिरोधी वा वाटरप्रूफ कभर को बारे मा सोच्नुको साथै, न त हामी बिर्सन सक्छौं कि यो गैर पर्ची हो। किनकि यस तरीकाले हामी पक्का गर्दछौं कि हाम्रो घरपालुवा जनावर पर्ची वा यात्रा को समयमा सार्दैन। यसले यो अधिक सहज र पक्कै पनी बनाउनेछ, त्यसैले हामी गर्नेछौं किनकि हामी सडक मा अधिक ध्यान केन्द्रित हुनेछौं।
जहाँ एक कुकुर कार सीट रक्षक किन्न
अमेजन: एक पटक फेरि, अमेजन हामीलाई कुकुरहरु को लागी कभर वा कार सीट संरक्षक को सबै प्रकार प्रदान गर्दछ। प्रतिरोधी फिनिश संग, सफा गर्न को लागी सजिलो छ र त्यो पुरा तरिकाले तपाइँको वाहनहरु लाई मोल्ड हुनेछ। सुरक्षा मा सट्टेबाजी को लागी र न केवल भनिएको कभर मा तर बूस्टर सीटहरुमा पनि।
किवोको: पशु विशेषज्ञ स्टोर पनि पूर्ण संरक्षकहरु कि सीटहरु, जस्तै कुर्सीहरु, सबैभन्दा संरक्षित जनावर बोक्न को लागी लंगर हुनेछ को रूप मा सबै भन्दा राम्रो विकल्प प्रदान गर्दछ। तपाइँ तपाइँको आवश्यकताहरु को अनुसार धेरै संभावनाहरु को आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ।
डिक्याथ्लन: खेल पसल बराबर उत्कृष्टता मा उनीहरु हाम्रा घरपालुवा जनावरहरु को लागी एक ठाउँ छोडेका छन् र त्यहाँ हामी वाहकहरु को विभिन्न प्रकार को पाउन सक्छौं, ताकि हाम्रो घरपालुवा जनावरहरु सधैं राम्रो संग सुरक्षित छन्।
Lidl: यो सुपरमार्केट सधैं घर र घरपालुवा जनावरहरु को लागी सामान को लागी छनौट गर्दछ। त्यसोभए यस अवस्थामा, हामी एक साधारण सीट कभर कि सोफा मा कपाल रोक्न वा घरपालुवा जनावरहरु को लागी एक सस्तो सीट कव सीधा जान को लागी विकल्प छ।
चौबाटोको: Carrefour सस्ता कभर मध्ये एक छ र यो राम्रो समर्थन को लागी पट्टा छ। यद्यपि यो सत्य हो कि यो धेरै मोडेलहरु छन् र ती सबै को एक पनरोक र प्रतिरोधी फिनिश छ। हामी अरु के माग्न सक्छौं?
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » कुकुरका सामानहरू » कुकुर कार सीट रक्षक
कुकुरहरु को लागी repellents: प्राकृतिक र कृत्रिम